Freeware ugu dambeeyay
Fadlan qor cinwaanka email-ka ah ee xisaabtaada. Code xaqiijinta A noqon doonaa waqti dambe aad ku. Marba haddii aad hesho code xaqiijinta ah, waxaad awoodi doontaa inaad si dooran password cusub ee xisaabtaada.
Microsoft waxay shaacisay in diyaarad dheeraad ah oo duulimaad ah ay imaaneyso Microsoft Flight Simulator sanadka 2022, ATR 42-600 / ATR 72-600. Waxay la shaqeynayaan Aerosoft ee diyaaradda waxayna ku dareen dhowr shaashadood oo shaashad ah iyo ogeysiiska. Waxaan la shaqeyneynaa Aerosoft si aan kuu keeno diyaaradda ATR mana sugi karno inaan wadaagno cusbooneysiinta. ATR 42 waa diyaarad goboleed ay soo saartay ATR, iyadoo shirkii ugu dambeeyay lagu qabtay magaalada Toulouse, France. 4tii Noofambar 1981, diyaaradda waxaa lala bilaabay ATR, ...
Kooxda Microsoft Flight Simulator waxay ku dhawaaqeysaa sii deynta World Update IV - France / Benelux. Tan waxaa ku jira liis aad u tiro badan oo ah POI (dhibcaha xiisaha leh) iyo faahfaahin badan oo dheeri ah oo la keenay qaybtan galbeedka Yurub. Wadnaha Galbeedka Yurub, isku duub ruuxa da 'kale oo ku dhex milmay saamaynteeda casriga iyo dareenka markii aad sahaminaysay aragtiyo badan oo la soo bandhigayay - laga soo bilaabo bulshooyinka badaha ilaa xarumaha magaalooyinka, beero canab ah oo aan caadi ahayn ilaa buuraha dhaadheer iyo dalxiis caan ka ah adduunka ...
Waqtiyo mashquul ah laakiin xiiso leh oo ka imanaya xerada X-Plane - waxaan hadda ku jirnaa heerarkii ugu dambeeyay ee geeddi-socodka horumarinta ee nooca 146 ee X-Xirfadlaha Xirfad leh waxaana higsaneynaa inaan si dhaqso leh u sii deynno. Wada-hawlgalayaashayada 'Thranda Design' waxay qabteen shaqo qurux badan oo dhinaca koodhinta ah sidaa darteedna waxaan ku cusbooneysiinnay waxyaabaha alaabada ku qoran bogga. Si fiican u qalantaa akhrin si aad u aragto liiska muuqaalka ballaaran oo ay weheliso sharraxaad aad u faahfaahsan. Waxaad ogaan doontaa in xirmada salka ay hadda ku jiri doonto siddeed nooc sida ...
HST Jilmooyinka ayaa soo saaray bayaan ku saabsan ku daridooda deegaan "xAmbience" ee loogu talagalay X-Plane 11 (taariikhda la sii deynayo toddobaadyo yar gudahood): Warbixinta Toddobaadka # 2: xAmbience Pro - Maxaa hadhay ka hor inta aan la sii deyn? - HST Jilmooyinka. Kusoo dhawow Warbixinta Toddobaadka # 2. Dhammaan dhibaatooyinka ayaa ka dambeeya waana ku soo laabannay tan. Maanta waxaan ka hadli doonaa: horumarka xAmbience Pro ee hadda, dib-u-dhiska 3D Clouds iyo munaasabadaha kale ee soo socda. Maxaa sii daayay? Guud ahaan, waxaan kudhowaad nahay xariiqa dhamaadka. Waxaa jira 2 ...
IndiaFoxtEcho waxay ku dhawaaqday cusbooneysiin ku saabsan MB-339-kooda ee loogu talagalay MSFS 2020. Diyaar garowga World Update IV waxay ahayd inay cusbooneysiiyaan dhamaan diyaaradahooda Microsoft Flight Simulator sidoo kale waxay heleen fursadan si ay u xaliyaan dhowr dhibaato oo yar yar oo MB-339 ah. Diyaarinta World Update IV, waxaan ku qasbanaanay inaan cusbooneysiino dhamaan diyaaradaheena MSFS si loogu daro faylasha cusub ee deegaanka oo ay bixiso shirkada Microsoft. Waxaan fursad u helnay inaan wax ka qabanno dhowr qalad oo yar yar oo MB-339 ah, sidaas darteed cusbooneysi cusub ayaa hadda loogu soo ...
Mashruuca VSKYLABS Aeroprakt A22-LS ee loogu talagalay X-Plane oo ay soo saartay Laminar Research ayaa gaadhay diyaar garowgii ugu dambeeyay ee nooca v1.0. Diyaaradda waxaa hadda loo diyaarinayaa duulimaadkeedii ugu horreeyay ee * gacantaada, oo ay ku jiraan buugaagta loo baahan yahay, dukumiintiyo iyo agabyo kale sida "Gacanta" ... waa fududahay in la isticmaalo * weheliyaha liistada hubinta 3D -In-Progress shaashadda screen ku lifaaqan this post). Sii deynta nooca v1.0 waxaa la filayaa dhammaadka Abriil 2021, haddii wax waliba u socdaan sidii loogu talagalay. Ku dhawaaqida mashruuca:
Fiidiyow yar oo fiidiyoow ah oo kaliya si loo xijiyo rabitaanka cuntada ee waxa imanaya maaddaama aan ku dhow nahay sii deynta Xirfadlaha 146. Xirmooyinka saldhigga waxaa ku jiri doona 100/200/300 nooc oo ay weheliso noocyada QT / QC / RAF sidoo kale. Qaybta 'X-Plane FMC unit' ayaa soo muuqan doonta isla markaana marka ugu dambaysa ee la sii daayo waxaan sidoo kale ku dari doonnaa qaab FMC ah oo summadaysan oo hadda ku jira horumarka.
Maaddaama aan si tartiib tartiib ah u dhammaystireyno cusbooneysiinta KA350-ka, oo aan dhowaan u sii deyn doonno macaamiisheenna, waxaan dooneynay inaan sidoo kale la wadaagno waxoogaa wip ah oo gudaha ah oo ah nooca diyaaraddeenna heerka daraasadda ee DC-3 ee loogu talagalay X-Plane 11. The Airfoillabs longtime riyadu si tartiib tartiib ah ayey u jirtaa Xigasho
Kulamada Aerosoft, waxaa la daabacay aragti horudhac ah muuqaalka xiga ee MSFS 2020 ee ka socda Stairport. Waxaa lagu soo waramayaa inay ka shaqeynayaan EGTP Perranporth Airfield, oo ku taal Cornwall, UK. Asal ahaan saldhigga dagaal ee WWII RAF, hadda waa garoon diyaaradeed oo GA ah oo ay maamusho Perranporth Flying Club in kastoo qaar ka mid ah astaamaha asalka WWII wali la arki karo. Xigasho
MilViz waxay ku dhawaaqday sii deynta diyaaradoodii ugu horreysay ee loogu talagalay jilitaanka duulimaadka Microsoft, FG-1D Corsair. Waxaa loo sameeyay si gaar ah MSFS 2020, Corsair wuxuu leeyahay qaab duulimaad oo cakiran, qaabab qurxoon oo qeexitaan sare leh, iyo qaab aad u faahfaahsan oo 3D ah. Mid ka mid ah halgamayaashii ugu aragga fiicnaa ee la soo saaray intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, dagaalyahankan caanka ah ee is qarxiya oo wata garabka gull-ka-leexsan ayaa diyaar u ah in la geeyo isla markaana uu doonayo inuu u roonaado cirkaaga jilitaanka ah. La abuuray ...